Kedu ka esi emezi weebụ SEO site na bloglinks?
Ụfọdụ ndị ọkachamara SEO na webmasters na-azọrọ na ịde blọgụ ndị ọbịa abụghị ihe dị oké ọnụ ahịa maka mgbasa ozi ma ọ bụ na-achọ site na engines ọchụchọ dịka usoro njikọ njikọ njikọ spammy. Otú ọ dị, ọ dị anyị mkpa ikwere na ya? N'agbanyeghị ihe akaebe dị iche na nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ akụkọ ifo banyere ịde blọgụ ndị ọbịa, nke bụ ma ọ bụrụ na eji ya mee ihe dịka njikọ ụlọ ọrụ.
E nwere ọtụtụ ihe gosiri na gosipụtara anyị na azụ azụ azụ azụ azụ SEO bụ uru bara uru mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu ị ga - esi jiri akwụkwọ ndị ọbịa mee ka aha, ikike, na ikpughe site n'aka SEO backlinks si blog posts - business consultant portland oregon.
akụkọ banyere blogging ọbịa
E nwere ọtụtụ ndị ọkachamara nke na-eche na blogging ọbịa na-aghọkwa mkparị iji wuo njikọ site na ya. Ha adighi akwado ka ha dabere na nzisa ozi ndi mmadu ma ghara ikweta akwukwo blog bu SEO dika o bu.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe blog, ọ ga-abụrịrị na ị natara ozi-emelite na-ezigara ozi ma ọ bụ ebumnuche ịmepụta ọdịnaya dị mma. Ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ na-agwa gị ka ị tinye njikọ dofollow na akụkụ ahụ. Site na Google, ị nwere ike ịhụ otú njikọ ndị a nwere ike isi bụrụ ihe ịma aka na ngalaba gị. Ihe di n'ime ya bu ala di ala, enweghi ihe omuma nke di omimi, ma adighi ejiko ya na onye edere ya. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke backlinks sitere na ọdịnaya dị otú ahụ na-eduga na ntanetị njikọ weebụ.
Otú ọ dị, n'ọnọdụ a, akọwapụtara m spam yiri. Ị nwere ike ịchọpụta ụdị spam ahụ site na ileba anya mbụ. Ma, ọ bụrụ na ị ga-ekwurịta banyere njikọ aghụghọ, na -eme ka ọdịnaya dị mma na nyocha. Ị nwere ohere ọ bụla iji chọpụta ụdị spam a.
Google na-ekwu okwu na usoro atọ ndị a kachasị agbagwoju anya:
Njikọ nkwado na saịtị gị;
Ndị edemede na-edeghị ihe ọ bụla na-enweghị ahụmịhe n'otu akụkụ ma dee banyere isiokwu ndị a na-anụbeghịrị;
Jiri otu ọdịnaya ahụ gafere ihe niile, na-emepụta ụda.
Ọ bụ nsogbu nkịtị n'etiti ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ iji kwụọ ụgwọ ndị na-anaghị arụ ọrụ na-erughị na ya. A gwara ha ka ha dee ọdịiche nke otu isiokwu ahụ ma gbasaa ya dị ka ebe ndị ọbịa. Ọ na-eme ka ọ pụta ìhè banyere nzipu ozi ndị ọbịa na ọ bụ ọrụ spammy.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịnwere onye edemede nke ghọtara otu isiokwu, ị ga-enweta ọkwa dị iche. Dị ka a na-achị, a na-ahụ ya site nyocha nke mbụ na ọdịnaya a kwesịrị iji nweta njikọ.
Ya mere, inweta uru site na backlinks blog SEO, ịkwesịrị ịkekọrịta nchọpụta ikpe, ndị na-eme nchọpụta ahịa, ụzọ ị na-eji arụ ọrụ gị na ụkpụrụ nduzi nke ga-enweta ụfọdụ uru nye ndị na-agụ akwụkwọ gị. N'ikpeazụ, ọ ga-ewetara gị nsonaazụ dị ebube banyere ọkwa na agụgụgụ afọ ojuju.